jornalizem - Somaaliland 24
Dagaal beeleed dib uga cusboonaaday galbeedka Gobolka Sanaag
Hal qof ayaa dhintay shan kalena waa ku dhaawacmeen degaanka Fadhi-gaab oo u dhexaysa Ceel-afweyn iyo Gar-adag oo dhaca galbeedka gobolka Sanaag, kadib markii dabley beeleed iskaga horyimaadeen.
Dagaalkan oo ay bilaabeen dabley rasaas ku furtay dad meel maqaaxi ah ku sugan, taas oo albaabka u furtay colaad mudo soo taagnayd oo dhowaanta la sheegay in la soo afjaray.
"Waxaa ku dhaawacmay shan qof, midna waa ku dhintay dagaal dabley laba beelood u dhexeeya oo ka dhacay fadhigaab maanta duhurnimadii, waxaana uu soo gaadhey gabal gaabkii" sidaa waxaa u sheegay HOL Cali Xuseen oo ku sugan magaalada Gar-adag oo 16Km. u jirta Fadhi-gaab.
Ciidmada Somaliland iyo masuuliyiinta Gobolka Sanaag ayaa gaadhey deegaanka si ay u xakameeyaan colaada labada beelood oo soo noqnoqotay sanado badan, xalkii u danbeeyeyna bishii aan soo dhaafnay la soo gabagabeeyey.
Dadka degaanadaasi ku dhaqan ayaa la sheegayaa in ay dhiilo colaadeed hortimi iyadoo magaalooyin badan ay wada degaan iyadoo mararka ay colaadan oo kale dhacdana ay si siman uga bilaabmaan colaadu, inkasta oo dadaal la sheegay in ay wadaan waxkaradka dadka degaanadaasi wada dega.
Isu ciidansi xoogleh ayaa ka soconaya degaankaas shaqaaqadu ka dhacday waxse la eegayaa awooda ciidan ee kala dextaagan labada dhinac sida ay ugu mitidaan ilaa waaberiga hadii Alle idmo.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxda Soomaaliya ku eedeeyey inay farogalin ku hayaan arrimaha Somaliland,isla markaana khalad iyo daandaansi ku tilmaamay dacwadda ay Soomaaliya u gudbisay UN-ta.
Xisbiyada mucaaradka Somaliland oo dalbaday in 6 bilood dib loo dhigo doorashada
Labada xisbi mucaarad ee Somaliland Waddani iyo Ucid ayaa maanta go’aan ku gaaray in doorashada madaxtooyada maamulkaasi dib loo dhigo muddo lix bilood ah, iyagoona codsiga go’aankooda u gudbiyay guddiga doorashada ee ay ugu yeeraan “komishinka”.
Guddoomiyeyaasha xisbiyada Ucid iyo Waddani Feysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale qaba in abaarta Somaliland ka jirta oo ah tii ugu darneyd ee muddo la arko darteed aan doorasho lagu qabin karin waqtigii hore loo go’aamiyey.
Dhanka xisbiga Kulmiye ee haya talada maamuulka Somaliland ayaa isagu qaba in dib u dhigista doorashada laga yeesho talo sharci islamarkaana uu guddiga doorashada go`aan ka gaaro
CAAQIL CABDIQANI CIISE MUUSE OO FARIIN ADAG U DIRAY WASIIRKA CAAFIMAADKA”XAGLOTOOSIYE DEEGAANKIISA AYAA U BAAHAN EE ANAGA NOOMA IMAAN KARO KARO
Widhwidh(Laascaanood) Caaqil Cabdiqani Ciise Muuse oo ka mid ah Waxgaradka Magaalada Widhwidh ee gobolka Buuhoodle ayaa ka Hadlay Safar la Sheegay inuu Wasiirka Caafimaadka Somaliland Saleebaan Ciise Axmed(XAGLOTOOSIYE) ku imaanayo deegaamada Widhwidh isagoo Wax laga Xumaado ku Tilmaamay Safarka Xaglotoosiye ee Xiligan oo uu Sheegay in Dadku Abaaraysan Yihiin balse aanay u Baahnayn Olole Iyo Arimo Siyaasadeed waxaana uu Yidhi isagoo Arimahaasi Ka Hadlaya
“Waxaanu Leenahay Deegaanka Gobolka buuhoodle Waa Sadex Qaybood oo kala ah Deegaanka Qorulugud,Deegaanka Xadhadhanka , buuhoodle gudihiisa, iyo Deegaanka Widhwidh,Hadaba deegaamada Widhwidh hoos yimaada iyo deegaanka Qorulugud waa deegaamo Xukuumadii Somaliland ka shaqayso oo ciidankii Joogo,oo Maayaro leh oo Shaqadii Qaranku ay ka socoto Balse Deegaanka Buuhoodle Gudihiisa Waa Goob lagu Muransan yahay oo maamulo kale ka Taliyaan,Dhibaatada Jirtaana Waxay tahay Deegaanka Buuhoodle oo uu kasoo jeedo Wasiirka Caafimaadka Saleebaan Ciise Xaglotoosiye Ilaa iyo intii uu Wasiirka ahaa Amase La Magcaabay muusan tegin Deegaanka ugu Balaadhan gobolka ahna deegaanka keliya ee Marka la eego Deegaamada Dhulbahante La iska diiwaangeliyay ee Doorashada La isku halayn karo,Widhwdihna waxaa Hoos yimaado 15 Tuulo waxaana ay Diiwaangelintu ka qabsoontay 11 Tuulo Afar keliya ayuunbaan la iska diiwaangelin oo aanay waxba ka dhicin “
“ Maanta Xili Abaareed Ayaa lagu Jiraa,Dadkuna waa Jilicsan Yihiin Xoolo iyagana Hadalkoodaba Daa,Waxaana aanu Leenahay Uma baahnin in Olole iyo Isdhex yaac uu Wasiirka Caafimaadku Noola Yimaado oo Nagu Soo Raro Waayo Markii loo Baahnaa Ninkii Imaan Waayay Maaha inuu Umada Rabash iyo buuq lasoo Doonto,Waana nagu Gef iyo Gardaro Cad oo Badheedh ah Mana Aqbali Doono “
“ Deegaanka baaxadaas leh Maamulka gobolka waxay ku leeyihiin Gudoomiye xigeenka Gobolka Buuhoodle Keliya,Xukuumadana waxay ku leeyihiin Wasiir Xigeenka boosaha iyo Isgaadhsiinta oo Dhowaan isagana La Magcaabay,Waxaana aanu isweydiinaynaa Codkayagii iyo Taladii Somaliland ee aanu Halkaas Gaynay(Deegaankayaga) Ma Noo Jari Waayeen Wasiir Buuxa “
Dhanka kale Waxaanu Leenahay Wasiirkii Aan intaas Imaan Deegaankayaga oo Iminka Doonaya inuu Iska Dhiso Xisbiga Kulmiye, Maaha mid aanu Aqbalayno,Waxaanuna leenahay Wasiir Weliba Waa inuu Deegaankiisa Tagaa Baanu Leenahay,Beeshuna Waxay leedahay Wasiir Ku xigeenka Boosaha Iyo Isgaadhsiinta Cali Maxamuud Cali Iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Faratoon ,Waxaana Talada Deegaanka ay ka Godaa baanu leenahay oo u Daba Fadhinaa Wasiir xigeenkayagaasi,Wasiir kasta oo Xukuumada Somaliland ahna Wuu noo Imaan Karaa Balse Xaglotoosiye Nooma imaan Karo Deegaanka Widhwidh,Hadiiba ay Dhacdo inuu Xaglotoosiye Yimaado Deegaamada Widhwidh iyo Inta Hoos Timaada Waxaa Marag madoon ah inuu Taageero Badan ka Lumin Doono Xisbiga Kulmiye
Daawo Muuse Biixi oo faahfaahin ka bixinaya aragtidooda dib u dhigista Doorashada
Muuse Biixi oo Guddoomiyaha 3aad ee KULMIYE u Magacaabay Xuseen Aadan Cade
Ku: Xuseen Aadan Cadde =Hargeysa =
Og: Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE =Hargeysa =
Og: Guddida Fulinta Xisbiga KULMIYE =Hargeysa =
Og: Madaxweynaha JSL, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud =Hargeysa =
Ujeeddo: Magacaabista Guddoomiye Ku Xigeenka 3-aad ee Xisbiga KULMIYE
Kadib markaan arkay xilka Guddoomiye-ku-xigeenka Saddexaad ee xisbiga KULMIYE ee bannaannaaday ansixintii Shirweynihii 3-aad ee xisbiga KULMIYE kadib.
Kadib markii aan la tashi la sameeyey xubnaha Hoggaanka xisbiga iyo cidda kale ee ay khusayso.
Kadib markaan arkay muhiimadda buuxinta xilka Guddoomiye-ku-xigeenimo ee bannaani u leedahay waqti xaadirkan habsami-u-socodka hawlaha xisbiga, waxa loo magacaabay:
– In Xuseen Aadan Cadde – Laga bilaabo maanta, January 15th, 2017, uu ahaado Guddoomiye-ku-xigeenka saddexaad (3-aad) ee xisbiga KULMIYE.
Waxa aan Alle uga baryayaa in uu Mudane Xuseen Aadan Cadde ku asturo xilka iyo masuuliyadda culayskeeda leh ee uu u qaaday dhammaan bah-weynta xisbiga KULMIYE.
NB: Magacaabista xilka Guddoomiye-ku-xigeenimo ee kor ku xusan waxa ay dhaqangali doontaa ansixinta shirka Golaha Dhexe ee ugu horeeya kadib. Xil gudasho wacan.
Khuburo Caalami Ah Oo Ka Socda Dalka Holland Oo Dalka Soo Gaadhay Iyo Ujeedada Socdaalkoodu Daaran Tahay
Khuburo caalami ah oo ka socda shirkad la yidhaahdo Maritime & Transportation Solution (MTBS) oo fadhigeedu yahay dalka Holland ayaa dalka yimid,kuwaas oo sida la sheegay daraasad ku samayn doona jidka isku xidha Somaliland iyo Itoobiya ee loo yaqaano marshuurca Berbera Corridor.
Waftigan khuburadda ah oo la filayo inay muddo maalmood ah dalka jogaan ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la yeelan doonaan masuuliyiinta laamaha dawlada isla markaana ay booqan doonaan magaalada Berbera iyo waliba dekeda magaalada Berbera.
Sida xogaha aanu ku helnay sheegayaan khuburaddan oo ka socda shirkadda magaceeda la yidhaahdo Maritime & Transportation Solution Business xarunteeduna tahay dalka Holland ayaa qandaraas ah daraaseyn iyo falaqayn (Diagnostic Analaysis) lagu samaynayo mashruuca dhismaha wadada isku xidhi doonta dekeda magaalada Berbera iyo suuqa ganacsi ee Itoobiya,waxaanay mashruucan sida la sheegay ka qaadatay shirkad kale oo la yidhaahdo Trade Mark East Africa.
Dhinaca kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in khuburaddan ay shalay kulan la qaateen wasiiru dawlaha arrimaha dibada Somaliland Maxamed Mixile Boqore oo la sheegay inuu xafiiskiisa ku qaabiley.
Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa qaatay talo sharci oo uu la-taliyahooda arrimaha sharcigu ka soo saaray mooshin ay golaha u soo gudbiyeen 21 mudane 19 November 2016, kaasoo khuseeyey ansixinta gobollada cusub ee dalka.
War Deg Deg:-Dhawaaq Rasaas Xoogan Oo Caawa Laga Dhex Maqlayo Gudaha Magaalada Laascaanood Iyo Xogo Kasoo Baxaya Rasaasta Dhacaysa Ciday Dhex Marayso
Wararka hadda naga soo gaadhaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool soona gaadhaya xafiiska shabakada wararka Ramaasnews ayaa sheegaya in caawa gudaha magaalada laascaanood laga dhex maqlayo dhawaaqa rasaas xoogan oo ka dhacaysa.
Dhawaaqa rasaastan ayaa naloo sheegay in ay ka dhacayso gudaha magaalada gaar ahaana xaafada Dix-jano ama Madareemin oo sida naloo sheegay wax aan fogayn u jirta suuqa magaalada laascaanood,iyada oo ilaa hadana dhacaysa xabbadu
Waxaana xoguhu noo sheegeen in rasaastani ay dhex marayso laba beelood oo dhawaan dirir dhex martay kuwaasi oo kala ah beelaha Baharsame iyo Qayaad oo dhawaan diriri dhex martay isla markaana sida la sheegay khasaare dhaawac iyo dhimasho leh-ba kala gaystay.
Ilaa hadda khasaaraha ka dhashay lama garanayo,waxaana naloo sheegay inay ilaa hadda dhacayso rasaastu.
Ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa iyagu ku hawlan sida naloo sheegay kala dhex galka labadaasi beelood iyo waliba sidii ay u joojin lahaayeen rasaasta dhacaysa.
Daawo Faysal Cali Waraabe Oo Aflagaadeeyey Waddani Iyo Habar-yoonis Caddeeyeyna Kulamadii Qarsoodiga Ahaa Ee Isaga Iyo Horjoogayaasha Somaliya.
Hogaamiyaha xisbiga khilaafku ragaadiyey ee UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa wareysigiisii ugu horeeyey ee loogu maxlalay musharaxa xisbiga UCID ku aflaageedeeyey xisbiga WADDANI iyo qaliida Habar-yoonis.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa banaanka soo dhigay oo si badheedh ah uga waramay xidhiidhkiisii qorsoodiga ahaa ee hogaamiyeyaasha Somalida.
Hoos ka daawo wareysigaa: